Milkiilayaasha Kooxaha Premier League-ga oo ku kala qeybsanaa doorashadii USA 2016 Yeey Taageereen Reer Glazer ?
Wednesday, October 17th, 2018 - 09:58:31
Thursday November 10, 2016 - 09:07:20 in Wararka by Kubad Bile
Milkiilaha Kooxda Manchester United ee Edward Glazer ayaa Lacag £45,000k ugu deeqay Donald Trump sidoo kale Clinton wuxu siiyey Lacag gaaraysa £4,000k si ay ugu tartanto doorashada dalka Maraykanka.
Avram Glazer oo ah nin la dhashay Milkiilaha Manchester United ahna Mid kamid ah Milkilayasha kooxdaasiayaa asaguna siiyey Donald Trump Lacag gaaraysa £250,000K halka Hillary Clinton uu ayadana siiyey £5,000k.
Mulkiilaha Kooxda Arsenal ee Stan Kroenke ayaa asaguna Marwo Hillary Clinton ugu deeqay Lacag gaaraysa £2,500K.
Sidoo kale Milkiilaha Kooxda Liverpool ee Tom Werner ayaa asaguna Donald Trump ugu deeqay Lacag gaaraysa £2,500K.
Roman Ibrahimovic oo ah Milkiilaha kooxda Chelsea oo u dhashay dalka Ruushka iyo Sheikh Al-Mansour oo ah Milkilaha Kooxda Manchester City oo u dhashay dalka United Arab Emirates ( UAE) ayagu wax taageero ah uma fidin Hillary Clinton iyo Donald Trump midkoodna.
Waxaa kale oo jirto in milkiilaha Sunderland ay saaxiibo dhaw yihiin Bil Clinton oo ah seyga Hillary Clinton oo laga guuleestay habeen hore. Asiga oo u muujinaaye taageero xad dhaaf ah wallow aan la ogeen inta uu ugu deeqay ollalaheeda siyaasadeed ee tartanka Madaxweyne ee soo idlaaday.
Dhinaca kale Kooxaha markii la kala qaado waa kuwa Milkiilayaasha Mareeykanka ah ee leeyihiin ee Sunderland, Man United, Liverpool ,sida Arsenal, Leeds iyo Everton ayaa u kala go'a sanaa labada dhinac. Man United iyo Sunderland dhanka Trump ahaa halka Liverpool, Arsenal, Leeda iyo Everton ay noqdeen dhanka Hillary.
W/D AK Caqil iyo Maanqaboojiye.